4Ps အပိုင်း (၁) - Purpose - IT-KOKO
4Ps ဆိုရင် များသောအားဖြင့် Marketing mix 4Ps လို့ ထင်ကောင်းထင်နိုင်တယ်၊ တကယ်တော့ ကျွန်တော်ပြောချင်တာ Marketing 4Ps မဟုတ်ပါဘူး။ အလုပ်တစ်ခုမှာ အောင်မြင်ဖို့ အစဉ်ပြေဖို့ ရှိသင့် ရှိထိုက်တဲ့ အချက် ၄ ချက်ကို အတိုကောက်4Ps လို့ ခေါ်လိုက်တာပါ။ 4Ps ကဘာတွေပါလည်းဆိုတာကို အောက်က ပုံမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ပထမ P ကတော့ အရေးကြီးဆုံး နဲ့ အခြေခံအကျဆုံး ဖြစ်တဲ့ Purpose (ရည်ရွယ်ချက်) ဖြစ်ပါတယ်။ Purpose မှာ fake purpose နဲ့ real purpose ဆိုပြီး ပြောကြည့်မယ်။ အဲ့လိုဆိုတော့ ဘယ်ဟာတွေက ရည်ရွယ်ချက် အစစ် (real purpose) နဲ့ ဘယ်ဟာတွေက ရည်ရွယ်ချက် အတု (fake purpose) တွေဖြစ်နိုင်မလဲ? ရှင်းအောင်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ တကယ့် ရည်ရွယ်ချက်က ကိုယ့်အတွက် တွန်းအားပေးမယ်၊ လိုအင်ဆန္ဒ ပြင်းပြမယ်၊ ကြိုးစားချင်စိတ်တွေ ပေါက်ဖွားလာစေမယ် ဆိုရင် သင့်အတွက် အဲ့ဒီ ရည်ရွယ်ချက်က စစ်မှန်တယ်လို ဆိုလို့ရမယ်။ အဲ့လိုမှ မဟုတ်ဘဲ သူများရယောင်လို့ လိုက်ယောင်မယ်၊ သူများပြောလို့ လုပ်မယ်၊ ကောင်းတယ်ဆိုလို့ လုပ်တယ် စတဲ့ ယောင်ဝါးဝါး ရည်ရွယ်ချက် တွေ ကိုယ့်မှာ ရှိနေလား ပြန်စစ်ကြည့်လို့ရတယ်။
တခါတလေ ကောင်းတဲ့ အရာတွေကို မိမိရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ထဲ ထည့်တတ်ကြတယ်။ ဘယ်သူမှ မိမိ ရည်မှန်းချက် ကို မကောင်းတဲ့ အရာတွေ မပြောချင်ကြပါဘူး၊ ဥပမာ အလုပ်မှာ သူဌေးက အလုပ်သမားတွေကို မေးမယ် “မင်းတို့ရဲ့ အလုပ်အပေါ်ထားတဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ၊ ရည်ရွယ်ချက်တွေကို ပြောလို့” မေးရင်.. ၁၀၀ မှာ ၁၀၀ လုံး ကောင်းတာတွေဘဲ ဖြေကြမှာဘဲ။ ဘယ်သူက “ကျွန်တော် company ကို တိုးတတ်အောင် မလုပ်ချင်ဘူး၊ ကိုယ့် အတွက်ဘဲ ကိုယ်ကြည့်မယ်၊ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဂရုမစိုက်ဘူး၊ Corporate Ladder ကို တူတူ မတတ်ချင်ဘူး”လို့ မဖြေကြပါဘူး။ ဘာလို့မဖြေကြတာလဲ? ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့ အသိအရ ဒါဟာ ဒီလိုမဖြေရဘူး၊ ဒီလိုဖြေရင် မကောင်းဘူးဆိုတာ သိတဲ့ အသိပညာ ရှိလို့ ဖြစ်တယ်။ အဲ့လိုဆိုတော့ ကောင်းတဲ့ ရည်မှန်းချက် တွေက အစစ်အမှန် မဟုတ်တော့ဘူးလား လို့ ပြန်မေးစရာဖြစ်လာတယ်။ ဘယ်ဟာအစစ် ဘယ်ဟာ အတုဆိုတာ မိမိ ကိုယ်တိုင်တောင် ရောနေတတ်တယ်။ အဲ့ဒီတော့ အစစ်ဆိုတာ မိမိရဲ့ ဘဝ ရည်မှန်းချက်အတွက် မိမိ ဘယ်လောက် လုပ်ချင်စိတ် ပြင်းပြလဲဆိုတဲ့ ပေါ်မှာ တိုက်ရိုက် သက်ဆိုင်မယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။
Your purpose drives priority of your life’s motivation and desire!
အရာရာဟာ ရည်မှန်းချက် ရည်ရွယ်ချက် မရှိဘဲနဲ့ လိုရာ ခရီးမရောက်နိုင်ဘူး။ လိုချင်မှု ပြင်းပြတဲ့ စိတ်ဟာ သင့်ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို ဖော်ဆောင်ပေးမယ့် အခြေခံ အုတ်မြစ်လို ဆိုလို့ရမယ်။ အဲ့ဒီတော့ ကိုယ့်မှာ ရှိနေတဲ့ short-term purpose နဲ့ long-term purpose တွေကို ပြန်လည် သုံးသတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကိုယ်လုပ်နေတာနဲ့ ကိုယ်လုပ်ချင်တာ၊ ကိုယ်လုပ်ချင်တာနဲ့ ကိုယ်ဖြစ်နေတာ၊ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာနဲ့ ကိုယ် ဖြစ်နေတာ ဘာတွေ ကွာခြား နေလဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ကိုယ်ဘဝရည်မှန်းချက်ဆိုတဲ့ အရာတွေကို ကိုယ်ဘယ်လောက်ထိ စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ လုပ်ကိုင်နေလဲ၊ ဘယ်အတိုင်းအတာအထိ ရောက်ရှိနေပြီလဲဆိုတာ ကို သိရှိပြီးရင်တော့ မိမိရဲ့ မိမိစိတ်ရဲ့ လွဲမှား ထင်ယောင်နေတဲ့ ရည်ရွယ်ချက် တွေကို အမြန်ဆုံးပြင်ဆင် နိုင်ပြီး ကိုယ့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်စစ်စစ်ကို မိမိကိုယ်တိုင် ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပြီး ပြင်းပြင်း ပြပြ ကြိုးစားရင် ပန်းတိုင်ဆိုတာ မလွဲဘူးလို့ ကျွန်တော် ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ ပြောရဲပါတယ်။
The roof of the desire is the intensity of the pursue!
အပိုင်း (၂) Professionalism
Cognitive Processes Education
Introduction of Scientific Thinking